Semalt - गुगल विश्लेषकमा आन्तरिक गतिविधिमा केहि बाध्यकारी मुद्दाहरू
आन्तरिक गतिविधि गुगल विश्लेषकमा आधार आधार पछाडि नम्बर १ स्पष्टीकरण हो। केहि स्प्यामको बारेमा भन्नु हुँदैन? वास्तवमा चिढचिढो हुनुको कारण, स्प्यामलाई प्रभावकारी रूपमा छुट्याउन सकिन्छ, जबकि आन्तरिक गतिविधि वास्तविक भेटहरू चिन्न गाह्रो हुन्छ।
एन्ड्रयू Dyhan, को ग्राहक सफलता प्रबन्धक Semalt , मद्दत गर्न आन्तरिक गतिविधि प्रबन्ध उपयोगी सुझावहरू मा यहाँ elaborates।
आन्तरिक गतिविधि के हो?
आन्तरिक क्रियाकलापले तपाई वा कुनै व्यक्ति द्वारा उत्पादित जानकारी उत्पन्न गर्दछ वा समूह चिपिंग व्यक्ति वा संस्थागत साइटमा कुनै व्यक्तिबाट। यी विजयहरू गुगल एनालिटिक्समा नामांकन गरिएको छ मानौं तिनीहरू वास्तविक वास्तविक पाहुनाबाट आएका हुन्।
यसले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ, विशेष गरी पछि किनभने यो छुट्याउन गाह्रो छ कि कुन भ्रमणहरू वास्तविक छन् र जुन साइटमा चिप्लिएका व्यक्तिहरूबाट उत्पन्न हुन्छ।
IP ठेगाना भनेको के हो?
आईपी ठेगाना एक असाधारण संख्या हो जुन प्रणाली, पीसी र बिभिन्न ग्याजेटहरू छुट्याउँदछ। IP हरू २ प्रकारमा वर्गीकृत गरिएको छ: सार्वजनिक एउटा जुन तपाईलाई सम्पूर्ण वेब र निजी एक मार्फत छुट्याउँछ। तपाईंको नेटवर्क पहुँच आपूर्तिकर्ता (ISP) मा आकस्मिक, एक स्थिर आईपी र एक डाईनामिक आईपी हुन सक्छ। तल तपाईले स्थिर आईपीहरू पट्टी निर्देशनहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ।
GA मा स्थिर IP हरूको साथ आन्तरिक गतिविधि पछाडि
तपाईंले ग्याजेटहरू होइन प्रणाली च्यानलहरू गर्न आवश्यक छ: यदि तपाईं प्रणालीसँग सम्बन्धित आईपी ठेगाना च्यानल गर्नुहुन्छ भने, यससँग सम्बन्धित ग्याजेटहरू मध्ये प्रत्येक एक पनि चेनेल गरिएको छ।
सेल फोन प्रयोग गर्दा वाइफाइको साथ तपाईंको वेबसाइट ईन्टरफेस परीक्षण गर्न: जब तपाईं आफ्नो पोर्टेबल वेब जानकारी प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंको आपूर्तिकर्ताले तपाईंलाई हरेक क्षण वैकल्पिक आईपी नियुक्त गर्दछ। तपाईंको फोनको प्रयोग गरी कुनै पनि साइटको परीक्षण गर्दा वाइफाइ अत्यधिक रुचाइएको हुन्छ किनकि यसमा तलका टेक्निकहरू प्रयोग गरी तपाईंको गतिविधि च्यानल गर्ने क्षमता छ।
कसरी आन्तरिक गतिविधि को लागी एक च्यानल बनाउन
तपाईं एक एकल आईपी वा समान आईपीको आईपीको दायरा अस्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ। यो ठाडो बार द्वारा बढाइन्छ यससँग मिल्दो आईपी पछि।
गुगल एनालिटिक्समा आईपीको स्कोप कसरी जोगाउने
बन्द अवसरमा जुन तपाईं एक विस्तारित संगठनमा हुनुहुन्छ, यो सम्भव छ कि तपाईंले पछिको आईपीहरूको दायरा सामना गर्नुभयो। प्रत्येक आईपी प्रविष्ट गर्नबाट अलग रहन, तपाईं एक नयाँ विकसित रेजेक्सको साथ च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ।
च्यानल उदाहरण बक्समा सिर्जना गरिएको अभिव्यक्ति प्रतिलिपि गर्नुहोस्
च्यानल परीक्षण गर्न, साइटबाट निषेधित क्षेत्रहरू खोज्नुहोस् र स्पष्ट पार्नुहोस् कि गतिविधि, लगातार रिपोर्टमा देखा पर्दैन, अभिव्यक्तिमा एक चरित्र थप गर्दछ।